Microleve ML-400 DOWNLOAD FSX & P3D & FS9 - Rikoooo
downloads ရယူရန္9506
Microleve ML-400 သဟဇာတ FS2004 နှင့် FSX / P3Dv1 Rio de Janeiro မြို့အတွက် Microleve နေဖြင့်မက္ကစီကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစွန်းရောက်အလင်းလေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်လေယာဉ်တင်အများအားဖြင့်အကြောင်းကို $ 12,275 (1998) များအတွက်ကိရိယာအစုံအဖြစ်ဝယ်ယူနေသည်။ မြန်နှုန်း 90 km / h ဒီလိုမြင်ကွင်း, အများဆုံးမြန်နှုန်း 140 km / h တင်းကုပ်မြန်နှုန်း 60 km / h ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံ သွား. အစွန်းရောက်အလင်းလေယာဉ်တင်သို့သော်သင်ဆဲ Rikoooo နှင့်အတူကို virtual ၌ဤစက်ပျံသန်းနိုင်ပြီး, မရှိတော့ရောင်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤ add-on comes with two repaints and custom sounds, realistic flight dynamics, virtual cockpit.
Author: OIMD ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ